कर्पोरेट अहंकार | Martech Zone
शुक्रवार, सेप्टेम्बर 8, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो पिज्जा जत्तिकै सजिलो छ तर तिनीहरूले यसलाई पाउँदैनन्।
कर्पोरेट अहंकारको कुनै कमी छैन। तपाईले जहिले पनि यसको संकेतहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो हरेक संस्थामा क्रिप हुन सक्छ। संगठनले यो सोच्न थाल्छ कि यो आफ्ना ग्राहकहरु भन्दा राम्रो थाहा छ, तिनीहरूले आफ्नो ट्रेक्शन गुमाउन शुरू गर्दछ। यो मेरो लागि रोचक हो कि धेरै कम्पनीहरूले मात्र यो निर्णय गर्छन् कि यो वास्तवमै समस्या हो जब राम्रो प्रतिस्पर्धा आउँदछ। त्यस बिन्दुमा तिनीहरू सामूहिक प्रस्थानलाई प्रतिस्पर्धामा दोष दिन्छन्, आफ्नै अक्षमताको लागि होइन।
यो त्यस्तो छ जस्तो कम्पनीहरूले विश्वास गर्दछ कि त्यहाँ छैन ROS, वा सेवामा फर्कनुहोस्। केही कम्पनीहरूसँग विशाल ग्राहक मन्जूरी हुन्छ ... र समस्या समाधान गर्न र ग्राहकलाई कदर देखाउन खोज्नुको सट्टा तिनीहरू केवल अधिक डलर पम्प गर्छन् जसले ग्राहकहरूलाई छोडिदिएका ठाउँमा बदल्नको लागि प्राप्त गर्दछन्। तिनीहरूले चुहावट बाल्टिन भर्न प्रयास गर्दै केही काम नगरे सम्म - र तिनीहरू मर्दछन्। यिनीहरू मध्ये धेरै कम्पनीहरूसँग धेरै गहिरो जेब छ, र उनीहरूले हामीसँग निष्पक्ष, निष्पक्षता र इमान्दारीपूर्वक व्यवहार गर्न सक्ने शानदार सम्भावनालाई हराउन जारी राख्छन्।
कन्सिडसेन्डिnding्ग, अहंकारी, शिकायतकर्ता, घृणित, अहंकारी, घमण्डी, उदार, संरक्षक, स्मार्ट गधा, स्नोबिश, स्नूटी, सुपरसीयलियस, श्रेष्ठ, अप्पिश, युपीटी - Thesaurus.com - अहंकार
यहाँ यस हप्ता घमण्डका केहि उदहारण उदाहरणहरू छन्:
Samsung - जब एक ग्राहकले फोन भत्काउन कत्ति सजिलैसँग चित्रित गर्‍यो, सामसुले फोन फिक्स गर्नु भन्दा ग्राहकको बिरूद्ध कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो।
क्याथरिन ह्यारिस - जब उनी आफ्नो ब्लग एक अभियान को नयाँ विपत्ती मा पोस्ट गर्छिन्, यस्तो देखिन्छ कि उनीहरुका आगन्तुकहरु अरु कोही थिएनन् साइटको निर्माण गर्ने कम्पनीका ई-मेलरहरू।
HP - बरु राम्रो हार्डवेयर निर्माण गर्न काम गर्नु भन्दा (आज काम गर्ने ठाउँमा नयाँ HP प्लैटर छ ... मलाई लाग्छ कि हामी प्रत्येक मर्मतको बीचमा १ पृष्ठ प्राप्त गर्न सक्दछौं), HP ले निर्णय गर्यो कि उनीहरूको कर्पोरेट स्टाफको जासूसीले केही सुधार परिणामहरू प्रदान गर्दछ। ... कसैले मलाई यो बुझाउनु पर्छ। कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्दैनन् जुन मसँग सम्बन्धित हुन चाहान्दिन।
Ask.com - यसको खोज इञ्जिनको प्रयोगलाई बढावा दिन को लागी, Ask.com ले प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न मिडिया ब्लिट्ज सुरू गर्दैछ। किन तपाईं त्यो पैसा लिनुहुन्न र उत्पादनको उपयोग गर्न योग्य गर्नुहुन्न? मलाई लाग्छ उनीहरूले सोच्दछन् कि अब उनीहरूसँग होम पेज छ, मानिसहरूले तिनीहरूलाई अधिक प्रयोग गर्नेछन्।
एप्पल - स्वीकार गर्दछ त्यहाँ एक 'हल्का' समस्या छ यसको साथ म्याकबुक स्वत: बन्द हुँदैछ। 'हल्का' को परिभाषा? एक रिकल को लागी धेरै महँगो।
माइक्रोसफ्ट - एक महान उत्पाद निर्माण नगर्नुहोस्, केवल सबैलाई यसलाई एक महत्वपूर्ण अपडेटको रूपमा लेबल लगाएर सोधेर बिना नै यसलाई डाउनलोड गर्न डाउनलोड गर्नुहोस्। I यस्तो लेखे यस्को बारेमा। यस्तो लाग्छ कि उनीहरूको मनसाय मैले कल्पना गरेको भन्दा अलि बढी कपटपूर्ण छ, आईआई of को स्थापनामा तपाईंको पूर्वनिर्धारित खोज इञ्जिनलिनलाई एमएसएनमा परिवर्तन गरेर।
टिकटमास्टर - सबै विकासकर्ताहरूले यसको नोट लिनुपर्दछ ... क्यानडामा, टिकटमास्टर मुद्दा हालेको छ किनभने उनीहरूको वेबसाइट विकलांग मानिसहरू द्वारा पहुँच योग्य छैन। मेरो साइट या त पूर्ण पहुँचयोग्य छैन तर यो कथा रातो झण्डा हो। हामी सबै सबै ग्राहकहरु लाई सेवाहरु प्रदान गर्न कोसिस गरिरहनु पर्छ! तथ्य यो हो कि यो केवल एक स्रोतको मुद्दा हो .. अरू केहि छैन। साथै, यो तपाइँको ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने भावको साथ तपाइँका ग्राहकहरू वा सम्भाव्यताहरू प्रदान गर्ने पर्याप्त तरिका हो।
केहि कथाहरूको सुखद अन्त हुन्छ, यद्यपि:
फेसबुक - तिनीहरूको भर्खरको कार्यक्षम विमोचनको साथ, फेसबुक अनजाने उनीहरूको ग्राहकहरूको गोपनीयता सुरक्षा लाई प्रभावित गर्‍यो। म विश्वस्त छु कि तिनीहरूले कम्पनीको नेतृत्वलाई पूर्ण पुनःप्राप्ति धन्यवाद दिनेछन्।
Digg - उनीहरूको शक्तिशाली भाइरल प्लेसमेन्ट इञ्जिनमा कथाहरूको लागि अझ राम्रो तौल प्रदान गर्ने प्रयासमा, डिग्गले यसको शक्ति प्रयोगकर्ताहरूलाई समात्यो, जसले आफ्नो फाइदाको लागि प्रणाली प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ। डिग्गले सहि ग्राहकहरु लाई सेवा बढाउँदै सही निर्णय गरे भन्दा केहि थोरै Digger जसले बढी र अधिक पावर प्राप्त गर्दै थिए।
गेटहुमान र ल्यायो / NoPhoneTree.com कसरी फोनको अर्को छेउमा वास्तविक आवाज प्राप्त गर्न स्वचालित फोन प्रणाली usurp कसरी अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न बलहरू भेला गर्दै छन्।
ZipRealty - एक साइट जसले मानिसहरूलाई उनीहरूका टिप्पणीहरू अनलाइन पोष्ट गर्न घरहरू जुन उनीहरू भ्रमण गरेका छन् कि बिक्रीको लागि छन् भनेर अनुमति दिन्छ।
फोर्ड - जब कम्पनीले राम्रो गर्दै छैन, फोर्ड बोल्ड हुँदैछ। केहि शिफ्ट गर्न को रूप मा यति बोल्ड विज्ञापन डलर लोकप्रिय ब्लगहरुमा!
म आशा गर्दछु कि तपाईंले यहाँको सम्बन्ध देख्नुहुनेछ ... सफल व्यवसायहरू उनीहरूको ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध, उत्पादनहरू र सेवाहरू सुधार गर्न सारिरहेका छन् जबकि गरिब कम्पनीहरूले बेवास्ता गर्दछन्, चुनौती दिन्छन्, बदमाशी गर्छन् र उनीहरूको ग्राहकहरूको साथ मान्यता दिन्छन्। यदि मात्र हामी सबै याद गर्न सक्दछौं:
तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्न कि तपाईंको उत्पादन तपाईंको ग्राहकका लागि कती महत्त्वपूर्ण छ।
तपाइँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्न कि तपाइँको उत्पादन परिवर्तन गर्दा कसरी तपाइँको ग्राहकहरु लाई असर हुन्छ।
तपाइँ पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्न कि तपाइँका ग्राहकहरूले कसरी तपाइँको उत्पादन प्रयोग गर्छन्।
यदि तपाइँ कुरा गर्नुहुन्न / सुन्नुहोस् / आदर गर्नुहोस् / धन्यवाद / सहानुभूति / माफी माग्नुहोस् / तपाइँको ग्राहकहरु लाई, अरू कसैले गर्नेछ।
तपाईंको ग्राहकले तपाईंको तलब दिन्छ।
तिमीले मलाई के बेच्यौ भनेर मलाई भन्यौ। मैले तपाईंलाई यो चाहेको भनेको थिएँ। तपाईंले मलाई भन्नुभयो जब म यो प्राप्त गर्दछु। तपाईंले यो मलाई वितरित गर्नुभयो जब तपाईं भन्नुभएको थियो। तपाईंले पठाउनु भयो जुन तपाईंले गर्नुभयो। मैले तपाईंलाई भनेको कुरा तपाईंले सुन्नुभयो। मैले तिमीलाई भुक्तान गरें तपाईंले मलाई धन्यवाद दिनुभयो। म तपाईंलाई धन्यवाद। म चाँडै फेरि अर्डर गर्दछु।
यो पिज्जा जत्तिकै सजिलो छ।
के टेक्नोराटीमा मनपर्नेहरू गणना हुन्छन्?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 8::2006० अपराह्न
अनौंठो केहि थोरैले त्यो आधारभूत अवधारणा पाउँछन्। अर्ल नाइटिंगेलले धेरै पहिले यो बिराएको छ। तपाईंले प्रदान गर्नुभएको वास्तविक सेवाको लागि तपाईंलाई व्यवसायमा क्षतिपूर्ति दिइन्छ।
सेप्टेम्बर 9, 2006 मा 5: 44 AM
धेरै राम्ररी लेखिएको डग, पहिले यस्तो चीजहरूको बारेमा कहिल्यै सुनेका थिएनन्।
सेप्टेम्बर 16, 2006 मा 2: 28 AM
यस वाक्यले डट कम बूम र बस्टको बखत जे भयो त्यसमा प्रशस्त मात्रामा जोड दिन्छ।
"केहि कम्पनीहरु मा विशाल ग्राहक churnâ? ¦ छ र यस समस्या समाधान गर्न र ग्राहक को लागी कदर देखाउन को लागी भन्दा, तिनीहरू केवल छोडेको प्रतिस्थापन को लागी ग्राहकहरु लाई अधिक डलर पम्प।"
मैले पोष्टको आनन्द लिएँ।